Sihlalutya esona sitshiphu sinexabiso eliphantsi kwikhaya lakho, eHomgeek | Iindaba zeGajethi
Izicoci zeRobot zokucoca umoya zithandwa ziimpawu ezifana neRoomba Ziye zaziwa kakhulu, kangangokuba intengiso enamandla yezixhobo ezifanayo iye yavela ngamaxabiso asezantsi kakhulu. Inyaniso kukuba xa iteknoloji ibekwa kwinkonzo yokugcina ixesha kunye nomsebenzi, asinakukhanyela ukuba siyayithanda, kwaye kuba uthanda ukukwazi ukufumana uninzi lwezixhobo ngelixa ugcina imali, sikuzisela olona phononongo lubalaseleyo.
Sikushiya ungenazizathu zokuthenga isicoci seerobhothi, Sikuzisa enye indlela yeHomgeek, esona sitshiphu sincinci esicocekileyo kwintengiso. Hlala kwaye wazi amava ethu ukuze wazi ukuba kufanelekile ukutyala imali kolu hlobo lwezixhobo okanye akunjalo, siya apho kunye nokuhlaziywa.
Njengesiqhelo, siza kukhenketha yonke imiba efanelekileyo yemveliso, ukusuka kwindlela esebenza ngayo ukuyila nokuzimela, le Homgeek irobhothi yokucoca indawo ibekwe endaweni yeemveliso ezinkulu, ukunikela ngokulinganayo ngexabiso eliphantsi kakhulu kodwa… ngaba kufanelekile? Injongo yethu namhlanje kukukukhupha ngaphandle kwamathandabuzo malunga nale meko, ke masingachithi xesha lide siye apho kuhlalutyo lwale mveliso ingaqhelekanga.
1 Uyilo lweRobot yokucoca izinto kunye nezinto
3 Ukuzimela kunye neenkqubo
4 Amava omsebenzisi kunye noluvo lomhleli
Uyilo lweRobot yokucoca izinto kunye nezinto
Uyilo yinto onokuyilindela kolu hlobo lwemveliso, irobhothi ejikeleze ngokupheleleyo eya kukuvumela ukuba ungabanjwa phakathi kwefanitshala ngokulula, ngelixa uyenza ukuba ibe mncinci ngakumbi. Yakhelwe ngeplastiki I-ABS, akukho zixhobo zinjenge-polycarbonateOkanye, yiyo loo nto sikukhumbuza ukuba inokuba novakalelo kakhulu kothuko olomeleleyo, kuba iplastiki ye-ABS, ngokungafaniyo ne-polycarbonate, ithande ukwaphuka phantsi koxinzelelo. Nangona kunjalo, ingaphezulu nje ngokwaneleyo kwimveliso enjalo kumava ethu. Inobubanzi beemilimitha ezingama-285, kunye nokuphakama kweemilimitha ezingama-75 ezinobunzima obupheleleyo be-1,7 kg.
Isiseko kunye namacala agqityiwe ngombala omhlophe, ngelixa icandelo elingaphezulu linikwe i Iplastiki ebengezelayo e-glossy kuluhlaza okotshani, okunika ukubamba okunomtsalane. Ngaphambili sifumana inzwa yothusayo, inkqubo yoxinzelelo yoomatshini eya kuthi ichonge, ngenxa yobungakanani bayo obukhulu, apho into ekufuneka iphetshwe. Ngexesha elifanayo phezulu siya kufumana ifayile ye- ikepusi yetanki kunye necebo lokucoca ulwelo, elifikeleleka lula. Kananjalo nakwinxalenye ephezulu sineqhosha lokucoca ngokuzenzekelayo xa sifuna ukuphepha ukusetyenziswa kwerimothi.
Masiye kwinto ebalulekileyo, ingakanani imveliso enokukwazi ukuyicoca. KUNYEEmazantsi siza kufumana kuphela imitshayelo emibini ebandakanyayoUkutyhala ubumdaka embindini wesixhobo, apho irabha kunye netanki yokutsala ikhoyo. Kufuneka ihambe nevili lesikhokelo ngaphambili kunye nokutsala okungaphezulu kabini emacaleni.
Eyona nto ibaluleke kakhulu (okanye phantse) kolu hlobo lwemveliso ngamandla okutsala, kule meko iHomgeek iyasiqinisekisa i-1000p, nangona siza kuyithandabuza, kuba ingamandla akhoyo kuphela kweyona inamandla kwintengiso. Ukunyaniseka, andifumananga bumdaka obuchasayo, kodwa i-1000p ibonakala igqithile. Kufuneka sitsho ukuba ayibandakanyi iibrashi ezininzi kunala macala mabini, nkqu kufutshane nendawo yokutsala.
Inendawo ekude ye-2,4 GHz RF Oku kuyasivumela ukuba silungelelanise ukusebenza kwerobhothi, kunye nesibali xesha, amandla kunye nokuyiphatha ngesandla. Ukuba awunayo imoto yeRC, inokuba yenye indlela enomdla.
Ukuzimela kunye neenkqubo
Inkampani yaseTshayina inxibelelana nebhetri eyi-2.200 mAh nge-14.8V, eya kusiqinisekisa ixesha lokusebenza elisebenzayo phakathi kwe-90 kunye ne-120 imizuzu, kunokuba ngama-90 kumava ethu. Intlawulo epheleleyo ithatha malunga neeyure ezintathu. Uyakwazi ukuyazi imeko yebhetri ngenxa yee-LED zayo eziphezulu, kwaye ngelishwa ayibandakanyi ukutshaja ngokuzimeleyo, oko kukuthi, kuya kufuneka siyidibanise nenethiwekhi ngokwethu ngokusebenzisa iadaptha efakwe ebhokisini. Ayisiyongxaki kakhulu kwaye sesinye sezizathu zokuba kutheni le nto imveliso inenye yexabiso eliphantsi kwintengiso.
Sineendlela ezahlukeneyo zokusebenzisa ezicwangciselwe kude. Singakhetha phakathi kokucoca izikhewu ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-30, ngelixa ikwanenkqubo ezenzekelayo (de ibhetri iphele) kunye nenye inkqubo esiya kuthi sikwazi ngayo ukulawula isicoci seerobhothi kulonwabo lwethu. Ngokwam, ndingumsebenzisi oqhelekileyo wenkqubo yokucoca ngokuzenzekelayo, kumava am iyakwazi ukucoca amagumbi amancinci (amagumbi) malunga nemizuzu engamashumi amabini.
Amava omsebenzisi kunye noluvo lomhleli
Irobhothi ayinazo izinto ezithile ezinje ngomtshini wokuwa, oko kukuthi, ukuba ucoca kwiindawo eziphakamileyo kubalulekile ukuba ubeke imiqobo ethintela ukuwa kwerobhothi. Eminye, sijamelene neerobhothi engagqithiyo kwi-50 dB yengxolo, ayicaphukisi kakhulu ukucoca rhoqo. Ngendlela efanayo ukusikelwa umda, ndifumene ubunzima obukhulu kwimowudi ezenzekelayo ikwazi ukucoca iikona kakuhle.
Kunjalo Ukutshayela okuqhelekileyo kunye nokuhla yonke imihla kwendlu kungaphezulu kokwaneleyoInyani yokuba nebrashi ephindiweyo inomdla kakhulu, nangona mhlawumbi ibrashi esembindini ilahlekile. Itanki kunye nesihluzo sikhulu ngokwaneleyo. Kodwa kufuneka siyiqonde into yokuba yenzelwe ukutshayela elona thuba liqhelekileyo kunye nobumdaka, nje ukuba ifumane izinto ezinobungakanani obukhulu (ezinjengeesiriyeli) iya kuba neengxaki ekubanyangeni.
Akukho ukulayisha ngokuzenzekelayo
Ayicoci iikona kakuhle
Ngaphandle isivamvo ukuphakama
Inkqubo yokufumanisa into yothukile, ayinazo izivamvo ezikufutshaneNangona kunjalo, kuthathelwa ingqalelo isantya sayo kunye nenkqubo, inyani kukuba andiwathandanga amandla okanye ingxolo yemivumbo emincinci enokwenzeka. Ngendlela enye, Akukhuthazwa amagumbi alayishwe ngokugqithileyo ngefanitshala okanye imiqobo, apho ingazukusebenza kwaye icothe, ishiya ngasemva iindawo ezinokufuna ukutshayelwa.
Umxholo wepakeji yile:
Iibrashi ezintandathu zokutshintshwa
Kuyinyani ukuba yenye ngexabiso elinomdla kakhulu, Ungayifumana ithengiswa nge- $ 75 njengoko bekunjalo kwimeko yam TomTop, okanye uyifumane ngexabiso eliqhelekileyo le- $ 99. Njengokuqaliswa kolu hlobo lwemveliso kubonakala kunomdla, ngaphezulu kokwanele ithala, amagumbi okuhlala kunye neegaraji. Ukuba ujonge into ethe kratya ephumeza into ethe kratya kunokutshayela ngokulula, isenokungabi yimveliso yakho. Amanqaku endiwunika imveliso inxulumene ngokusondeleyo nenyani yokuba ixabisa malunga ne- € 75, kude nexabiso elinikezelwa ziimveliso ezifanayo. Ungayibona koku LINK
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Sihlalutya esona sitshiphu sinexabiso eliphantsi kwikhaya lakho, eHomgeek
Yuri R. Uribe sitsho
Ahh !! Xiaomi :)! Ngokubanzi olu lwakhiwo lulungile: ndinayo kwi-Ilife V5S Pro kwaye ilungele iipositi ezinothuli: uyicwangcise kwaye ulibale: nangona ndipholile ngeXiao kunye nemephu yayo, inyani kukuba i-Ilife v8 ibonakala ingcono Ixabiso leedepho kunye neendawo zokugcina ... Ndiyabulisa kwaye unakekele! qhubeka nenqaku 🙂 Enkosi
Phendula uYuri R. Uribe
UJulian Casas sitsho
Enkosi ngevidiyo! Kuqala ndathenga enye kwi-cecotec kwithuba eladlulayo ... ndaye ndagqiba ukuyibuyisa iinyanga ezintathu kuphela ngenxa yenkonzo ebalaseleyo emva kokuthengisa evela eAmazon. Ngexesha elidlulileyo bandinike enye ye-Ilife (i-VS okanye i-V5 ndicinga) kwaye ayikhange indinike ngxaki 🙂 Ndisandula ukufumana i-a8 (eza nemephu) kwaye oku ... Ngokuzimeleyo: Bendingalindelanga lukhulu ngexabiso kodwa wow! Even… nokuba kunjalo: nanini na ndimbona ndikhumbula i-cecocet esikelelweyo nomdlalo weqonga endikhe ndadlula ukuwubuyisa: ´ (
Phendula uJulian Casas
Ezona ndawo zevidiyo zibalaseleyo zabantwana